Mpanamboatra Cup Cup vita pirinty - Mpanamboatra sy mpamatsy Cup PET vita pirinty
16 Oz vita pirinty Kofehy plastika PET 92MG manana fahaizana 375ml Ny fitaovana, Polyethylene Terephthalate (PET), dia sariaka amin'ny tontolo iainana, mazava loko toy ny kristaly ho an'ny fahitana mihamitombo ary afaka manome mateza tsara.Ny kaopy plastika 12 Oz natokana ho an'ny pirinty dia vita pirinty amin'ny inks azo antoka sakafo mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny mpanjifa sakafo rehetra ny vokatra. Kapoaka plastika vita amin'ny PET 12 oz vita pirinty dia mety amin'ny kianja filalaovam-baolina, kaonseritra, fisotroana, kafe, hetsika ary maro hafa. Miaraka amin'ny fampiasana be dia be, manome fotoana mahafinaritra izy ireo hahafahan'ireo mpanjifanao ny marika, logo na endrika anao
Amin'izao andro sy fotoana izao, ny fananganana marika no zava-dehibe indrindra. kaopy plastika vita pirinty miaraka amin'ny logo na slogan'ny orinasanao dia manitatra ny mombamomba anao manokana amin'ny mpanjifanao, ary tafiditra ao anatin'ny fampielezankevitrao marika.
kaopy plastika vita pirinty dia serivisy manampy serivisy ho an'ny mpanjifanay. Manolotra serivisy fanontana marika sy namboarina amin'ny fonosanay sakafo tsy azo ampiasaina ihany koa izahay - fanontana namboarina tamin'ny kaopy plastika, kaopy kafe, kaopy biodegradable ary maro hafa!
Mpanamboatra matihanina izahay Kitapo plastika PET vita pirinty amin'ny Shina .Ny fitaovana, Polyethylene Terephthalate (PET), dia sariaka amin'ny tontolo iainana, mazava ny lokon'ny kristaly ho an'ny fahitana mihamitombo ary afaka manome mateza tsara. Ny antsika rehetraHamafa ny kaopy plastika PET azo namboarina sy natao pirinty tamin'ny zavatra azon'ny eritreritrao omena ary eo am-pelatanan'ny mpandrafitra ao an-trano ny dingana rehetra, manampy amin'ny famoahana ny hevitrao!